Accueil > Gazetin'ny nosy > Fitakian’ny mpiasan’ny fadin-tseranana: Hojeren’ny fanjakana hiteraka fahapotehan’ny toekarena eto fotsiny ve ?
Fitakian’ny mpiasan’ny fadin-tseranana: Hojeren’ny fanjakana hiteraka fahapotehan’ny toekarena eto fotsiny ve ?
Nandefa fampandrenesana mialoha fa hitokona (préavis de grève) any amin’ny fitondram-panjakana ny sendikan’ny mpiasan’ny fadin-tseranana (Sympadou) eto Madagasikara fa hitokona mandritra ny 48 Ora ny talata sy alarobia ho avy izao (amin’ny herinandro ambony izany). Ny antony moa, na tsy nanambara ara-pomba ofisialy an’io aza ny Sendika Sympadou dia tombanan’ny mpanara-maso fa tohin’ny fitakian’izy ireo ny hisitrahany ny mari-pankasitrahana azy ireo tamin’ny tombom-barotra afa-karatsaka (reliquat de prime). Tamin’ny volana jona 2017 teo no efa nitakian’izy ireo an’io.
Ny fitondram-panjakana dia niziriziry tsy nety nandoa an’io satria hoe « mavesatra amin’ny kitapom-bolam-panjakana io fitakiana io ». Mahatratra 24.000 tapitrisa ariary (24 miliara), raha atambatra, hoy ny akom-baovao.
Tamin’ny fitokonana nataon’ny mpiasan’ny fasin-tseranana tamin’ny taon-dasa dia nikatso tanteraka ny raharaha teo anivon’ny fadin-tseranana, ary nahamay volon-tratra ny fitondram-panjakana mihitsy izany satria ny ain-dehiben’ny firenena no mikatso, ary ny toeran-dry zareo mpitondra no nahiany voalohany hitongilahila raha tsy mirodana, ka nihazakazaka nitady vahaolana ry zareo mpitondra fanjakana. Dia niroso tamin’ny fametrahana rafitra ifanakalozan-kevitra na « plateforme de dialogue » ny sendikan’ny mpiasan’ny fadin-tseranana sy ny fanjakana. Hatramin’izao anefa dia tsy nahitan’ireo mpiasa fahafaham-po na tsirim-panantenana izany resaka izany fa karazan’ny fampandriana adrisa no misy, hoy ny mpiasa, ka izay no isan’ny fototr’izao firosoana amin’ny fitokonana mandritra ny roa andro amin’io herinandro ambony io izany.
Eo izany no hahitana ny fahaizan’ny mpitondra fanjakana mamaha ny olana raha tena mitsinjo ny tsy hikatsoan’ny fandraharahana ny fadin-tseranana izy ireo. Marihina hatrany fa fikatsoan’ny toekarem-pirenena no endrika isehoan’ny fitokonan’ny mpiasan’ny fadin-tseranana.
Izahay tsy manome rariny na manohitra ny fitakian’ny mpiasan’ny fadin-tseranana raha manery ny fitondram-panjakana hikaroka vahaolana haingana, ary vahaolana mahomby fa tsy vahaolana peta-toko. Ny fanahianay mba tsy hampikatso ny fandraharahana ara-toekarena eto no zava-dehibe aminay, ka raha olana tsy ho voavahan’ny mpitondra fanjakana dia tsy hoe « tsy olana izany » fa ilay mpitondra fanjakana mihitsy no tsy mahavoa.
Tsy tokony hadinoina fa ny fepetra rehetra takian’ny famahana olana eto amin’ny tany sy ny firenena, na olana inona na olana inona, dia tsy misy antony tsy ahafahan’ny mpitondra fanjakana mamaha azy raha manana ny finiavana hiroso amin’izany ny mpitondra. Ny mpitondra no mitana ny fahefam-panjakana, ny volam-panjakana, ny olom-panjakana, ny fitaovam-panjakana… ka nahoana no tsy ho vitany ny mamaha ny olana mitranga, na inona na inona ? Tsy famahana olana amin’ny fanaovana famoretana na jadona koa anefa fa famahana olana amin’ny fikatsahana ny tena tombontsoan’ny firenena, ary tsy hafa fa ao anatin’izany ireo mpiasan’ny fadin-tseranana ireo.